EVY's Kitchen: Egg inatoast
မနက်ဖြန်မနက် ရုံးပိတ်ရက်မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်စားချင်သူများအတွက် ပေါင်မုန့်ကြက်ဥကင်လုပ်နည်းကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီမုန့်လေးကို အရင် ဘလော့နှစ်ဦးကာလများက လုပ်ပြခဲ့သလို Food magazine ကလေးအစီအစဉ်အတွက်လည်း ရေးပေးဖူးပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ဒီမုန့်က ကလေးလူကြီးမရွေးစားနိုင်တဲ့မုန့်ပါ။ ရှိပြီးသား ပစ္စည်းများနဲ့သာ ပြုလုပ်နိုင်တာကြောင့် အားလုံးနှစ်သက်ကြပါလိမ့်မယ်
ပေါင်မုန့် အဖြူ ၂ ချပ်
ချိစ်ပြား ၁ ချပ် (ချိစ်ကြိုက်ရင် ၂ ချပ်ထည့်လို့ရပါတယ်)
1. အာဗန်ကို ၁၆၀ ဒီဂရီအပူပေးထားပါ
2. ပေါင်မုန့် တစ်ချပ်ကို ဘေးသား လက်တစ်လုံးခန့်လှီးထုတ်ထားလိုက်ပါ။
3. ကျန်တဲ့ပေါင်မုန့်နောက်တစ်ချပ်ပေါ်မှာ ချိစ်များကို ပုံပါအတိုင်းဖြူးလိုက်ပါ။
4. နောက် လှီးထုတ်ထားသော ပေါင်မုန့်ဘေးသားများကိုတင်ပေးပါ။
5. အလယ်မှနေရာလွတ်တွင် ကြက်ဥဖောက်ထည့်ပြီး ချိစ်ထပ်ဖြူးပါ
6. ထို့နောက်အာဗန်တွင် ၁၀ မိနစ်ခန့်ကင်ပါ။
7. ကြွပ်ရွပြီးအရသာရှိတဲ့ ပေါင်မုန့်ကင်အသင့်ဖြစ်ပါပြီ
Posted by Evy at 2:08 PM
Labels: Baking, Kids menu, သရေစာ
ပေါင်မုန့်ကြက်ဥကင် လုပ်နည်းလေး မှတ်သားသွားတယ် Evy ရေ... စားရတာအရသာရှိပြီး လုပ်ရလွယ်ကူတဲ့ နည်းလေးမို့ သဘောကျတယ် ကျေးဇူးနော်...